Indlwana Yendlu Yekhofi - I-Airbnb
Indlwana Yendlu Yekhofi
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Micheley & Michael
U-Micheley & Michael Ungumbungazi ovelele
Ikotishi elisanda kwakhiwa, elithandekayo egcekeni elingemuva lendlu yekhofi yomlando yasendaweni. Leli khaya elincane elingokwezifiso lakhiwe ukuze lithathe ukubukwa okuhle, okubheke eningizimu. Ikotishi lethu lisendaweni ekahle enkabeni yedolobha iSeward, kodwa futhi lisendaweni yangasese egcekeni elingemuva futhi livikelekile kuthrafikhi yezivakashi. Yonke imininingwane icatshangelwe lapho kuhlanganiswa lesi sikhala sobuciko, futhi sijabule ukwabelana nawe!
Leli kotishi elihlangene linakho konke ozokudinga - ikhishi, umbhede olingana nendlovukazi, kanye nehitha ethokomele ye-Vermont Castings ukuze uhlale ufudumele ezinsukwini zemvula. Sikude nje ngezinyathelo ukusuka e-Alaska Sealife Center, e-Seward Harbor, naku-Main Street.
4.98 · 252 okushiwo abanye
Leli kotishi lisemagcekeni e-Resurrect Art Coffee House, kodwa lihluke ngokuphelele. Ingaphesheya komgwaqo wesonto lendawo lamaWeseli futhi eduze kwe-Kayak Adventures Worldwide, inkampani yasendaweni eqondisayo ye-kayak.
Ibungazwe ngu-Micheley & Michael
Mina noMicheley singafinyelelwa kangcono ngombhalo! Noma ungaphinda usishayele uma kukhona okuphuthumayo okuvelayo. Sifuna uzizwe usekelwe ngempela futhi unakekelwe ngesikhathi sokuhlala kwakho! Mina naye sinikeza izivakashi zethu ubumfihlo obugcwele, njengoba nje besingenza kumakhelwane walapha edolobheni. Woza uphile njengomuntu wendawo :) lapha endaweni yekhofi!
Mina noMicheley singafinyelelwa kangcono ngombhalo! Noma ungaphinda usishayele uma kukhona okuphuthumayo okuvelayo. Sifuna uzizwe usekelwe ngempela futhi unakekelwe ngesikhathi sok…
UMicheley & Michael Ungumbungazi ovelele